Wasiirka Shaqo Gelinta Oo Beenisay In Ay Is Khilaafeen Agaasimaha Guud | SDWO.COM & SomalilandNews.net
Wasiirka Shaqo Gelinta Oo Beenisay In Ay Is Khilaafeen Agaasimaha Guud
Hargaysa (SDWO): Wasiirka wasaaradda shaqo gelinta iyo arrimaha bulshadda Somaliland Hinda Jaamac Gaandi, ayaa beenisay warar sheegayay in khilaaf uu soo kala dhex galay iyada iyo agaasimaha guud ee wasaaradaasi.
Waxaanay sheegtay in ay wada shaqayn iyo is ixtiraam uu ka dhexeeyo iyadda iyo agaasimaha guud, isla waxyaabo badan ay si wada jira u qabteen mudadii uu wasaaradda shaqo gelinta agaasimaha ka ahaa.
Kadib markii maalmahan warar la isla dhex marayay gaar ahaana baraha bulshadda ee Internet-ka oo sheegayay in khilaaf meel sare gaadhay uu soo kala dhex galay wasiirka wasaaradda shaqo gelinta iyo agaasimaha guud ee wasaaradaasi Maxamed Cilmi Aadan (Ilkacase).
Hase yeeshee wasiir Hinda oo wararkaas ka jawaabtay ayaa waxba kama jiraan ku tilmaantay, “Ma jiro wax khilaaf ah oo naga dhexeeya aniga iyo agaasimahayga. Waxaana naga dhaxaysa wada shaqayn iyo is ixtiraam iyo kalsooni aad u badan.
Waxaanan rejaynayaa in haddii aanu wasaaradda sii wada joogno wakhti badan in waxyaabo badan oo aan hore loo qaban aanu ka midho dhalin doonno, anagoo kaashanayna agaasime waaxeedyadda wasaaradda iyo shaqaalahaba”ayay tidhi wasiir Hinda oo maanta la hadashay Bulsho TV.
Waxa kaloo ay tilmaantay wasiir Hinda Gaandi in isbedel balaadhan uu wasaaradda ka muuqdo intii uu agaasimaha guud ka ahaa Maxamed Cilmi Aadan Ilkacase.
Waxaanay tidhi “Wakhtigii la ii keenay Agaasime Maxamed Ilkacase iyo maanta waxaan aad ugu faraxsanahay in uu ila qabtay wax fara badan, oo iigu suuro galay wada shaqayntiisa.
Aad iyo aad ayaanan ugaga mahad celinayaa. Sidoo kale madaxweynaha waxaan uga mahad naqayaa in uu noo soo xulay agaasime Maxamed Cilmi Aadan”.